“The Lighter and the Princess’ Gown” ဇာတ်လမ်းသစ်အတွက် ဆံပင်ဆေးဆိုးလိုက်တဲ့ Chen Feiyu - Asia News Bar
Arthur Chen Feiyu ကတော့ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ‌တွေကြားမှာ တောမီးလောင်သလိုပဲ အုတ်အော်သောင်းနင်းဖြစ်အောင် လုပ်မိလိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Feiyu ဟာ သူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းသစ် outdoor ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးမှုအတွက် ဆံပင်ကို ရွှေရောင်ဆိုးခဲ့တာကြောင့်ပါပဲ။
သိသာထင်ရှားလွန်းနေပြီး တော်တော်လေးပြောင်းလဲသွားတဲ့ ဆံပင်အရောင်ကို ထိတ်လန့်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ အနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ ဆံပင်ဆေးဆိုးခြင်း၊ သိသာလွန်းတဲ့ မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်တို့ကို မကြာသေးခင်ကမှ တားမြစ်လိုက်တဲ့ ဥပဒေတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ‌ကိုပဲ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် မင်းသားကတော့ ဇာတ်လမ်းသစ်ထဲက ဇာတ်ကောင်ရဲ့ပုံစံနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိအောင် ဆံပင်ဆေးဆိုးခဲ့ရရှာပါတယ်။
The Lighter and the Princess’ Gown ဇာတ်ကားထဲမှာ Feiyu က ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ရေးဆွဲရမှာ တဖက်ကမ်းခတ်အောင် ဉာဏ်ထက်လွန်းပေမဲ့ ခေါင်းမာရန်လိုတဲ့ ပညာရှင်ကျောင်းသားအဖြစ် သရုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ တက္ကသိုလ် လူငယ်အချစ်ကားဖြစ်ပြီး မင်းသမီးချော Zhang Jingyi နဲ့ တွဲဖက်ရိုက်ကူးနေပါတယ်။
The Lighter and the Princess’ Gown ဇာတ်လမ်းကတော့ စာရေးဆရာ Twentine ရဲ့ နာမည်ကျော်ဝတ္ထုကို ကျောရိုးယူက ဇာတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။ ပထမနှစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေး Zhuyun (Zhang Jingyi) ကတော့ စာသင်နှစ်တွေအတွက် ရည်မှန်းချက်အကြီးကြီးရှိသူလေးပါ။
ဒီကောင်မလေးက ကျောင်းရဲ့ bad boy လေးဖြစ်တဲ့ Lixun (Chen Feiyu) အတွက် မျက်စိဆံပင်မွှေးစူးစရာဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ပျင်းရိပြီး ပိန်းတိန်းနေတဲ့ပုံစံပေါ်နေပေမဲ့ တကယ်တမ်း Lixun ဟာ တဖက်ကမ်းခတ် IT skill မှာတော့ တဖက်ကမ်းခတ်အောင်တော်တဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင်ဖြစ်နေပြီး Zhuyun ကိုလည်း အတန်းဖော်တွေရဲ့ ကိုယ်ထိလက်ရောက်နှောင့်ယှက်‌မှုတွေကနေပါ အကာအကွယ်ပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ Zhuyun ဟာ သူမရဲ့ သက်သာရာဇုန်လေးကနေ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီး Lixun ရဲ့ programming team နဲ့ လက်တွဲခဲ့ပါတော့တယ်။ နှစ်ယောက်ကြားမှာ အချစ်ပန်းလေးတွေ ပွင့်လန်းလာတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာပဲ Lixun ဟာ မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့် ထောင်ကျသွားခဲ့တာကြောင့် တည်ဆောက်ထားတဲ့အချစ်‌တစ်ခုဟာ လဲပြိုခဲ့ရပါတော့တယ်။
နဂိုကတည်းက ဆိုးပေလေးဖြစ်တဲ့ Lixun ဟာ မတရားမှုကြောင့် ဘယ်လိုတွေ ပြောင်းလဲသွားမလဲ? အမုန်းတရားနဲ့ လက်စားချေလိုစိတ်တွေဟာ ဘယ်သူ့အပေါ် သက်ရောက်သွားမှာလဲ? သူမသိလိုက်တဲ့နောက်ကွယ်ကဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ မြှုပ်ကွက်တွေရှိဦးမလား? စသဖြင့် လူငယ်အချစ်ကားကောင်းကောင်း‌လေးကို ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဝတ္ထုထဲကဇာတ်ကောင်အတိုင် ဆံပင်ရွှေအိုရောင်ဆေးဆိုးလိုက်ရတဲ့ Feiyu ဟာ စာအုပ်ဖတ်ပြီးသူတွေရဲ့အာရုံကိုပါ ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ Feiyu ရဲ့ အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ပုံစံရှိတာကြောင့် ဒီဇာတ်ကောင်နဲ့ မလိုက်ဖက်ဘူးဆိုပြီး ဝေဖန်ခဲ့သူတွေခမျာလည်း မင်းသာ‌းချောရဲ့ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းကို မြင်ပြီးနောက် ပါးစပ်ပေါက်ပိတ်သွားရပါတော့တယ်။
ဒါရိုက်တာကောင်းကောင်းအပြင် ထုတ်လုပ်ရေးဖက်ကလည်း ထုထုခံခံရှိတာကြောင့် ဒီဇာတ်လမ်းက တော‌်တော်တော်နာမည်ကြီးနေတာပါ။ လူငယ်ကျောင်းသားဘဝကနေ အပြိုင်အဆိုင်များတဲ့ စီးပွားရေးလောကထဲကို ခြေချခဲ့ရပြီးနောက် ဖြစ်လာတတ်တဲ့အရာတွေကို လူငယ်သရုပ်ဆောင်သစ်တွေနဲ့အတူ သေချာရိုက်ပြထားတာကြောင့်ပါ စိတ်ဝင်စားနေကြပါတော့တယ်။
ဇာတ်ရံအနေနဲ့ Zhao Zhiwei, Zeng Keni, Qian DiDi နဲ့ Cui Yuxin တို့က ပါဝင်ထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းသရုပ်ဆောင်တွေကတော့ အားလုံးနဲ့ သိပ်မရင်းနှီးလောက်ကြသေးပေမဲ့လည်း လူငယ်အများအပြားကို စင်တင်ရင်း ထည့်သွင်းရိုက်ကူး‌ထားတာဟာ တက္ကသိုလ်ဇာတ်လမ်းနဲ့တော့ အလွန်လိုက်ဖက်နေပါတော့တယ်။ အားလုံးထဲမှာတော့ ဆံပင်ဆေးဆိုးလိုက်ရတဲ့ Feiyu တစ်ယောက် အဆင်ပြေပြေနဲ့ ရိုက်ကူးပြီးစီးနိုင်ဖို့သာ မျှော်လင့်ရပါတော့တယ်။
Next Unpacking လုပ်ရင်း BTS အဖွဲ့ထဲက Bais ကို ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ BL မင်းသားချော P'First »
Previous « Korea ရိုးရာဝတ်စုံကို တဆင့်မြှင့်ပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ ဝတ်စုံနဲ့ Met Gala ပွဲ တက်ခဲ့တဲ့ Queen CL
၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် album ​ရောင်းအားအမြင့်ဆုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ K-Pop Entertainment ၁၅ ခု
ကိုယ်ပိုင် YouTube Channel နဲ့လည်း စံချိန်သစ်တင်ပြီး “Social Media Queen” ဖြစ်​ကြောင်း ပြသလိုက်တဲ့ Lisa